युवाहरु परिवर्तनका सम्वाहक : पठान
कपिलवस्तु, २९ पुस । संघीय र प्रदेशको निर्वाचनदेखि अस्तव्यस्त भएको ससफो को भातृ संगठनहरु अहिले चुस्तदुरुस्त रूपमा पुनः निर्माण भैरहेको छ ।
फोरमका सांसद सम्मानित
काठमाडौं, २८ पुस । शनिबार काठमाडौंको खसिबुँमा हलिं नेवाः दबू (वल्र्ड नेवाः अर्गनाइजेशन), नेपाल च्याप्टरको दोस्रो महाधिवेशनको अवसरमा सङघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई उनले विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजनमा कसैको सोर्सफोर्स चल्दैन : प्रमुख सल्लाहकार रिमाल
काठमाडौं, २८ पुस । प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले कर्मचारी समायोजनमा कसैको सार्सफोर्स नचल्ने बताएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसको सहयोग रहने : गच्छदार
विराटनगर, २८ पुस । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसको सहयोग रहने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रदेश २ सबभन्दा पछाडि परेको छ : उपप्रधानमन्त्री यादव
सिरहा, २७ पुस । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सातै प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ स्वास्थ्य र शिक्षामा पछाडी परेको बताएका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य विकासका लागि आधारभूत आवश्यकता : मेयर गुप्ता
रौतहट, २७ पुस । गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय कुमार गुप्ताले शिक्षा स्वास्थ्य विकासका लागि आधारभूत आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
‘भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहन्छौं’
काठमाडौं, २७ पुस । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भारतसँग अघि बढ्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने नेपालले अपेक्षा राखेको बताएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न आग्रह
काठमाडौं, २६ पुस । नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सुधार लगायतका विषयमा केन्द्रीत रही २०७५ पुस २५ गते इलाममा आमरण अनसन थालेकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यही सरकारले नेपाल समृद्ध बनाउँछ : प्रवक्ता श्रेष्ठ
राम नारायण पंडित, सिराहा, २६ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आवश्यकता अनुकुल संविधान परिमार्जन गर्दै आर्थिक रुपमा देशलाई समृद्ध बनाउने बताएका छन् ।
कांग्रेस र नेकपाका दर्जनौं नेता कार्यकर्ता राजपामा प्रवेश
बारा, २४ पुस । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दर्जनौं नेता कार्यकार्ता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा प्रवेश गरेका छन् ।
राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ एकल अध्यक्षीय संरचनामा जाने
काठमाडौं, २४ पुस । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले पाँचबुँदे निर्णय संयोजक राजेन्द्र महतोलाई बुझाएको छ ।
स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको विस्तार तीव्र
कपिलवस्तु, २३ पुस । हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले आफ्नो संगठन विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार
काठमाडौं, २३ पुस । टीकापुर घटनाका अभियोग लागेका राजपाका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा।गोविन्द केसीका बारे योगेश भट्टराईको धारणा
आफूलाई सम्मानको अपेक्षा गर्नेले अरुलाई सम्मान गर्न जान्नु पर्दछ डा. केसीलाई यो कुरा सिकाउनु पर्दा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ ।
हिन्दू राष्ट्र सहितको माग गर्दै ज्ञापन
वीरगन्ज, २३ पुस । राम राज्य परिषद् पर्सा जिल्ला कार्य समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई समक्ष हिन्दु राष्ट्रसहितको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएकोे छ ।
काँग्रेस नेता शशांक कोइराला दिल्ली प्रस्थान
काठमाडौं, २३ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।
सरकार सञ्चालनको विषयमा गम्भिर समीक्षा सुरु : अध्यक्ष प्रचन्ड
रुपन्देही, २३ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओली र आफूले सरकार संचालनको विषयमा गम्भिर समीक्षा सुरु गरेको बताएका छन् ।
नोट प्रतिबन्धप्रति भारतीय संसद्मा चर्चा
काठमाडौं, २३ पुस । भारु पाँच सय र दुई हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको दुई साताअघिको निर्णयमाथि भारतको संसद्मा चासो व्यक्त गरिएको छ ।
नेकपा कपिलवस्तुको नगर कमिटी बैठक सम्पन्न
कपिलवस्तु, २२ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय कपिलवस्तुमा आइतबार सम्पन्न प्रथम बैठकबाट इमरान खान सदस्य सहित ८१ सदस्यीय नेकपा कपिलवस्तु नगर कमिटी गठन भएको छ ।
सरकारको नियतमा बेइमानी छैन : नेपाल
जनकपुरधाम, २२ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको नियतमा बेइमानी नरहेको बताएका छन् ।
मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको दायित्व : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको मूल दायित्व भएको बताएका छन् ।
हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टी फोरममा समाहित
काठमाडौं, २२ पुस । संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा ‘हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल’ समाहित भएको छ ।
वाइडबडीमा प्रकरणमा जुनसुकै पार्टीका भए पनि कारबाही हुनुपर्छ : देउवा
मोरङ, २१ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइडबडी विमान प्रकरणमा जोसुकै भए पनि कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।